नयाँ सहरका स्थापनाका लागि जग्गा उपलव्ध – Purbihotline
नयाँ सहरका स्थापनाका लागि जग्गा उपलव्ध
विराटनगर÷नेपाल सरकारले पुुराना सहरलाई नयाँ सहर अर्थात स्र्माट सिटि बनाउने योजना अघि बढाएपछि नयाँ सहर स्थापनकालागि मोरङ जिल्लाका स्थानीयहरुले स्वस्र्फुुत रुपमा जग्गा दिन थालेका छन् ।
मोरङको पुुरानो सदरमुुकाम रंगेलीलाई नयाँ सहर बनाउने योजना अघि बढेपछि रंगेली नगरपालिका वार्ड नं. ७ का स्थानीयहरुले सोमबार रंगेली नगरपालिकालाई ६१ विघा जग्गा उपलव्ध गराएका छन्। किसानहरुले रंगेली नगरपालिका पुुगेर सात नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डललाई ६१ विघा जग्गाको लालपुुर्जा बुुझाएका हुन् ।
सरकारले हुुलाकी राजमार्ग संग जोडिएको रंगेली बजारलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न जग्गा माग गरेपछि सो वडाका स्थानीयहरुले जग्गा उपलव्ध गराएका हुुन् ।
वडा अध्यक्ष मण्डल मार्फत ६१ विघा जग्गाको लालपुुर्जा सहितको निवेदनदर्ता गराएको स्थानीय शत्रुुधन रजतले बताए । सो वडाका किसानहरुले नयाँ सहरका लागि स्वतस्र्फुत रुपमा जग्गा प्रदान गरेको रजकको भनाइ छ ।
रंगेलीलाई ओझेलमा पार्दै योजना अन्यत्र लैजान खोजेको भन्दै रंगेली नगरपालिका वडा नं. ६ का स्थानीयहरुले पनि यस अघि ८५ विघा जमिनको लालपुर्जा नगरपालिकामा बुुझाएका थिए । रंगेली नगरपालिकाका ९ वटै वडाका स्थानीयहरु आफ्नो वडामा नयाँ सहर बनाउने योजनमा लागेका छन् ।
सरकाले रंगेलीको ४, ६ र ७ नम्वर वडालाई लक्षित गर्दै नयाँ सहरको योजना ल्याएको हो । नयाँ सहर स्थापनका लागि कम्तिमा ५० विघा जमिन आवश्यक पर्दछ । त्यसमा नयाँ सहर आयोजनाले पक्कीनाला, सडक, ड्रेन, खेलमैदान, सभाहल सहित पूर्वाधारयुुक्त विकासगरी आन्तिममा सम्वन्धित जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता दिएपछि त्यहि जग्गा घडेरीमा विक्री गरेर नयाँ वस्ति बसाल्ने सहित पुर्वाधार खडा गर्ने नयाँ सहरको योजना हो । रंगेली नगरपालिकाले स्थानीयबाट प्राप्त भएको जमिनमध्ये कुुन ठाउमा नया सहर उपयुुक्त हुुन्छ भन्ने अन्तिम निर्णय कार्यपालिकाले गर्दछ । रंगेलीमा नयाँ सहरकालागि ३०, ३० करोडका ४ वटा योजना निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । कुमोद अधिकारी
← सरकार गतिशिल बनाउछौंः भट्टराई
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध रतुवामाई नगरपालिका →